Saqaa:Mi’a ulfinaa haati ilma hangafaa harkatti keewwattu – Oromedia
Home » Aadaa » Saqaa:Mi’a ulfinaa haati ilma hangafaa harkatti keewwattu
Boorana biratti ilma angafaa ta’uun eebbifamuudha jedha Kidaanii Zallaqaa kitaaba isaa Safuu fi Aadaa jedhu irratti. Sababiin isaa ilmi angafaa abbaatti aana jedhee maanguddoon Booranaa kan itti hime kitaaba isaarra kaa’era.
Saqaa haati ilma hangafaa boranaa ilmasheef harkatti keewwattu
Ogeettiin waajjira aadaa fi Turizimii aanaa Ya’a Bal’oo Aadde Xummee Garboolee ilma angafaa gara abbaatti aanu kanaaf jila guddaa tolfamurratti haati isaa Saqaa tolfattii himani.
Saqaan kuni mi’a ulfinaa ilma angafaaf gammachuu qaban ittiin ibsatani.Ilmi maandhaa yookaa quxisuu ta’uun ebbifamaa miti jechuu aakka hin taane nuuf baraa.
Booranni ilma dhiiraa dursa argateen waan milkiitu naaf mul’ate jechuuf malee Oromoo kam birattuu ilmi angafaa goobana qa’eeti.
Booranni ilma hangafaa guddaa kan ulfeessuuf yagguu abbaan hin jirre gaaddidduu qa’eeti jedhaani. Abbaan du’ee kan dursee lafa waraannatu,reeffa abbaatis mataa qabee bool’aan kan ga’u ilma angafaa kana.
Kidaanuu Zallaqaa kitaaba isaa safuu fi aadaa jedhu irratti yaada kana kaa’era.Ilma sirna akka kanaan eegan jabeessanii kabaja laatuuf jedhan maanguddoo Gura Dambalaa Aanaa Elwayyee.
Booranni ilma angafaa kana maqaa baasuuf yookaa gubbisuuf jila sana kan miidhagsaniin haati ilma dhiiraa angafaa deesse Boorana Cufaan kan eebbifamtu Saqaa kan yoo qabaattedha.
Saqaan kuni gogaa loonii irraa kan hojjatamu ta’eetu akka faayaa harkatti keewwatama. Gogaan irraa hojjatamu qaqal’atee talaantalameetu harkarraa gadi rarra’a.
Dheerinni isaa dhundhuma tokko ga’uus danda’a. Bakka harkatti keewwatamurratti calleenis ta’ee meeshaa miidhaginaa dhibiitiin bareechuun akka danda’amu ogeettiin Waajjira Aadaa fi Turizimaa Aanaa Ya’a Bal’oo Aadde Xummee Garboolee dubbataniiru.
Saqaan kunn akka sagalee dhageessisuuf fiixee gogaa qaqal’atee harkarraa rarra’uurratti sibiila hidhu.
Weelliftuu Elemaa Tokkichaa akka natti himtetti dubartiin Saqaa keewwatte fiixee isaarratti bilbila hidhuu dandeessi. Bilbilli suni gaafa ilma dahan sana gubbifatan harkarratti hidhamaaf.
Itti-gaafatamaan Waajjira Aadaa fi Turizimii Godina Booranaa Obbo Jaatanii Diidaa agaloon bilbilli ilma qananiin guddisaniif ni hidhama jedhanii natti himaniiru. Ilmi angafaammoo Boorana biratti qananii waan argatuuf agaloo hidhuuf.
Weelliftuu Elemaa akka eertuttis bilbilli haati ilmaa fiixee saqaarra keessee sagalee dhageessisu kuni ilma gubbisan sana gammachiisuuf irree irratti hidhuuf.
Bilbilli irree bitaatti hidhameef kuni gaafa daa’imni kuni guddatu gara Saqaatti deebi’ee kan rarraafamu ta’a. Aadde Xummee Garboolee akka himanitti gaaf jila dhibii deemtuu fi ofiifis jila qabaattu haati suni Saqaa kana keewwatteetu ittiin of ibsiti.
Previous: Odaa Bultum
Next: sirna ayyaana Ateetee godina Wallagga bahaa